थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिकाद्धारा ४६ करोड ६२ लाख बजेटको सीमा निर्धारण - Sagarmatha Online News Portal
कुन वडाको कति ?
सोलुखुम्बु । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका थुलुङ दुधकोसीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का लागि ४६ करोड ६२ लाख १६ हजार ७ सय बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
गाउँपालिकामा बुधबार बसेको श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धाण समितिको बैठकले विभिन्न शिर्षकबाट उक्त रकम प्राप्त गर्ने अनुमान सहित सीमा निर्धारण गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले दिनुभएको जानकारी अनुसार संघीय सरकार मार्फत प्राप्त हुने समानिकरण अनुदान १३ करोड ३४ लाख, शसर्त अनुदान २३ करोड ५५ लाख, संघीय राजस्व मार्फत ७ करोड ६५ लाख ७ हजार र आन्तरिक राजस्व ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै प्रदेश समानिकरण अनुदान ७८ लाख १६ हजार र १ करोड अ.ल्या रकम रहने बताइएको छ ।
यस्तै, सोही बैठकले जनसङ्ख्या, भूगोल, तथा राजस्व सङ्कलन क्षमताको आधारमा वडागत सिलिङ निर्धारण गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी वडा नम्बर ९ लोखीमलाई ६७ लाख १ हजार र सबै भन्दा कम वडा नम्बर ४ जुबुले ४२ लाख ८२ हजार ८ सय बजेट प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
यस्तै वडा नम्बर १ नेलेले ६१ लाख १३ हजार, वडा नम्बर ६ मुक्लीले ६० लाख ८० हजार, वडा नम्बर ७ देउसाले रु. ५६ लाख ४१ हजार ६ सय, वडा नम्बर २ काँगेलले ५० लाख ७६ हजार ८ सय, वडा नम्बर ८ देउसाले रु.४७ लाख ७७ हजार ६०० बजेट प्राप्त गर्ने छन् ।
गाउँपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार वडा नम्बर ५ जुबुले ४७ लाख ५५ हजार २ सय प्राप्त गर्दा वडा नम्बर ३ पञ्चनले ४५ लाख ७२ हजार प्राप्त गर्नेछन् । वडाले प्राप्त सिलिङ अनुसार योजना निर्माण गर्ने बताइएको छ । यस अघि जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाले ५७ करोड ५३ लाख ५४ हजार २ सय ६४ बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ ।